Vaovao - Ny fiakarana haingana amin'ny gorodona PVC sa hanova ny lamina misy eo amin'ny sehatry ny gorodona?
Ny PVC dia be mpampiasa amin'ny indostria any ambanivohitra maro, soloin'ny pipa sy ny mombamomba azy. Raha ny antontan'isa momba ny fampahalalana Longzhong, amin'ny fampiharana ambany ny PVC amin'ny taona 2018, ny tahan'ny fantsona sy ny mombamomba dia 27% sy 24% avy. Tao anatin'izay taona faramparany izay, saingy misy indostria any amin'ny indostria ambanivohitra maro any PVC, izay indostrian'ny gorodona PVC. Ny habetsaky ny fitakiana PVC rehetra dia nitombo ihany koa tamin'ny 3% tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 7% tamin'ny 2020.
Amin'izao fotoana izao, ny fanjifana isan-taona ny gorodona PVC dia mihoatra ny 300 tapitrisa m2, izay manosika ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny gorodona PVC ao an-toerana, ary mamorona toby indostrialy efatra any Beijing, Zhangjiagang, Shanghai ary Guangzhou. Anisan'izany i Beijing, ny vokatra coil dia tena manafatra, Zhangjiagang no faritry ny indostrian'ny ravina pvc sy WPC lehibe indrindra any Chine, ary i Beijing sy Shanghai kosa mifantoka amin'ny orinasan-tsoratry ny marika PVC an-trano sy ivelany any an-trano sy any ivelany, ary ny vokatra totalin'ireto efatra ireto ny faritra dia mahatratra 90% amin'ny famokarana an-trano.
Ambany ny tsenan'ny tsena eto an-toerana, ary antenaina fa hisolo ny gorodona laminate sy majika amin'ny ho avy
Amin'izao fotoana izao, noho ny fitaoman'ny tsy faneken'ny besinimaro, ny gorodona PVC dia ampiasaina matetika any an-tsekoly, hopitaly, fijanonan'ny bus sy faritra hafa, ary kely kokoa ny fampiasana trano.
Raha ampitahaina amin'ny firenena mandroso, ny haavon'ny tsenan'ny gorodona PVC any Shina dia mbola ambany ihany. Tamin'ny taona 2017, 4.06% ihany ny fitakian'i Shina ny gorodona PVC, ary mbola be ny toerana fitomboana. Ny gorodona PVC any Sina no ampiasaina matetika hanaovana haingon-trano ho an'ny daholobe, fa ny 50% any Etazonia kosa dia ampiasaina amin'ny haingon-trano. Miaraka amin'ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny firenena, ny fampiharana ny gorodona PVC dia ho be lavitra amin'ny ho avy. Antenaina fa ny gorodona PVC dia hisolo ny gorodona laminate sy ny gorodona mitambatra ao anatin'ny 5-10 taona ho avy, ka mampitombo be ny tsenan'ny 8% - 9% eo ho eo.
Ny fanondranana ny gorodona PVC dia mitombo haingana
Avy amin'ny 1,39 tapitrisa taonina tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 3,54 tapitrisa taonina tamin'ny taona 2018, ny habetsahan'ny fanondranana ny gorodona PVC any Shina dia nitombo 1,5 heny tao anatin'ny dimy taona lasa, ary 27% ny salanisa fitomboana isan-taona. Ny taham-pitomboan'ny fanondranana isan-taona dia nitombo hatramin'ny $ 1,972 miliara ka hatramin'ny US $ 1,957 miliara tamin'ny taona 2014. Amin'ny ho avy, miaraka amin'ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny haitao sy ny haitao famokarana ny orinasan-tsambo PVC sinoa, dia hampirisihina bebe kokoa ny fangatahana fanondranana PVC any Shina.
Floor, Karipetra Pvc, Flooring Sponjy amin'ny biby, Pvc Sponjy Flooring, Nahatsapa ny Flooring Flooring ny biby, Floor Carpet Roll,